कालीकोटमा कर्फ्यु हट्यो | Radio Langtang 90.3 Mhz
कालीकोटमा कर्फ्यु हट्यो
कालीकोट १० पुस,कालीकोटमा लगाइएको कर्फ्यु हटेको छ । यही पुस ७ गते रातिबाट लगाइएको अनिश्चितकालीन कर्फ्यु सोमबारबाट हटाइएको हो ।
७ गते प्रहरीको गोली लागेर म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएपछि तनाव भएको कालीकोटमा सोही दिन (शुक्रबार) बाटनै कर्फ्यु लगाइएको थियो । घटनामा म्यादी प्रहरी विवेक एेडीको मृत्यु भएको थियो ।
पीडित पक्षले मृतकलाई शहीद घोषणा, उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था र म्यादी प्रहरीको तलबका विषयमा भएको विवादबारे छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर अान्दोलन चर्काएपछि कर्फ्यु लगाइएको थियो । घटनाबारे छानविन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. मानबहादुर विकको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको समिति कालीकोट पुगेपछि कर्फ्यु हटाइएको हो ।
समितले सोमबार नै दुवै पक्षवीच छलफल गर्ने छ । कर्फ्यु हटाइएको भएपनि प्रशासन असपासमा भने निषेधित क्षेत्र कायमै राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले जानकारी दिएको छ । मृतक परिवारलार्इ सरकारकारले १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय यस अघि नै गरिसकेको छ ।
इपिएल क्रिकेटमा आज दुई खेल हुँदै
नुवाकोट शिवपुरीका श्याम तामाङ मृत भेट्टिए
रसुवामा सिकाइ पछि पुनःनिर्माणले गति लियो
रसुवा कात्तिक २८ ,पार्वतीकुण्ड २ हाँकुका ४२ वर्षीय सोनाम तामाङलाई भूकम्पले भत्काएको घर कसरी बन्ला भन्ने ठूलो चिन्ता थियो । ...
अनमोलको रेकर्ड ब्रेक गर्दै प्रदिप बने ‘महंगा’ नायक !
‘प्रेमगीत’बाट स्टार बनेका नायक हुन् प्रदिप खड्का । ‘प्रेमगीत २’ को सफलता पछि उनको क्रेज थप बढेको छ । चक्लेटी ...
एसिसी पूर्वीक्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपाललाई
काठमाडौँ २ पुस एसिसी १६ वर्षमुनि (यु–१६) पूर्वी क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपालले हात पारेको छ । थाइल्याण्डको टेर्डथाइ क्रिकेट मैदानमा आज भएको फाइनल खेलमा ...